Ta thegwọ n',lọ Akụ, Ọ bụghị Onye Ohi | Martech Zone
E nwere mbuso agha nke blọọgụ na saịtị na-ebu amụma ọnwụ nke Twitter mgbe ụfọdụ akụkọ ngosi ama ama ama hacked. Offọdụ saịtị ndị ahụ na-ekwu maka ndị hacker na ụjọ na Twitter na nleda anya (ntiwapụ ?!). Olee ihe ndị ụwa na-eme ndị mmadụ?
Eziokwu, achọpụtara m ụfọdụ ozi hapụrụ site hacker na-atọ ọchị. Nke a apụtaghị na anaghị m ejide hacker ahụ, n'agbanyeghị. O kpebiri ịhazi ederede nke mere akwụkwọ ọkọwa okwu megide onye nchịkwa Twitter. Mgbe ọgụ ya rụsịrị ọrụ, ọ banyere. Mgbe ọ banyere, ọ tọgharịa okwuntughe akaụntụ ndị ọzọ. Mgbe ọ gbanwere okwuntughe, ọ banyere na akaụntụ ha. Enwere nkọwa zuru ezu nke mbanye anataghị ikike na Wired.
The hacker ọbụna filmed mpụ na hapụrụ a mma ụzọ na-eso:
Twitter abụghị mmemme e-commerce, na-ejide data kaadị akwụmụgwọ gị. Twitter enweghị ozi nchekwa mmekọrịta gị. Twitter anaghị emegharị ma ọ bụ nwaa ịbụ ngwugwu nyocha ụwa niile. Ebumnuche Twitter abụghị ka nke a mee. Ọ bụ ezie na ụzọ ha si eme nchedo kachasị mma nwere ike ọ gaghị efu, ọ bụghị ha kpatara na mmadụ nọ ebe ahụ kpebiri mbanye anataghị ikike ha.
Were ya na Twitter bụ ụlọ akụ na onye na-agbapụ ya bụ ohi. Mgbe onye ohi ụlọ akụ na-arụ ọrụ iji chọpụta ntụpọ na nchekwa ma mesịa mebie nchekwa ahụ, anyị ana-ata ụlọ akụ ahụ ụta? Mba, anyị anaghị.
Twitter azaghachila. Ọ bụrụ na hacker mara ọkwa Twitter nke ngabiga nchebe ma ha edozighị ya, m ga-aza ha ajụjụ. The hacker nwere ohere ime nke ahụ… ma ọ bụghị.
Tags: titter paswọọdụTwittertwitter mbanye anataghị ikike
“Mgbe onye ohi ụlọ akụ ahụ na-arụ ọrụ iji chọta mmezighị emezi na nche ma mesịa mebie nchekwa ahụ, anyị na-ata ụlọ akụ ahụ ụta? Ee e, anyị achọghị. ”
Anyị anaghị! Ana m arụ ọrụ maka Bank of America. Tụkwasa m obi, ụlọ akụ ga- kpamkpam na-ata ụta maka nchekwa ntụpọ. Ma site na mgbasa ozi yana ndị ahịa ya.
Enwere ike ikwu otu ihe maka Twitter. Ọnwụ ya ọ ga-esi na mwakpo ahụ na njedebe na-akpata n'ihi ndị na-agba ọsọ? Eleghị anya ọ bụghị. Ma nghọta nke ndị ọrụ ya na saịtị ahụ enweghị nchedo, echere m, ga-ewepu ya megide ụfọdụ saịtị SocNet ndị ọzọ na-azọrọ na usoro ha dị nchebe. Ma eleghị anya, ọ bụghị ugbu a, mana oge - na nnọgidesi ike nke ndị na-egwu egwu, nke ọma, mbanye anataghị ikike - ga-eme ka Twitter daa ikpere ya.
Nwere ezigbo isi. Achọghị m ikwenye na ya! 🙂